Juneeydiin Saaddoo badii Oromoo irratti raawwateef dhiifama gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Juneeydiin Saaddoo badii Oromoo irratti raawwateef dhiifama gaafate
Miseensota OPDO mootummaa ganuufis ta’ee keessaa dadhabsiisuudhaaf fedhii qaban jajjabeessuu fi waadaa jireenyaa isaaniif mirkansuu qabna.
Juneeydiin Saaddoo gocha yeroo prezidaantii naannoo Oromiyaa turetti ‘miidhaa kallattiidhaanis ta’ee al-kallattiin maletti’ ummata Oromoo irraan gayeef dhiifama gaafate. Juneeydiin dhiifama kan gaafate yeroo OMN irratti dhiyaate ture.
Obboo Juneeydiin dhiifama gaafachuun isaa yaada addaddaa hawaasa Oromoo keessatti kaasee jira. Namoonni heddu Juneeydiin dhiifama gaafachuu fi miidiyaa OMN irratti mudhachuu isaa qeequ. Woggoottan heddduuf diina tajaajilaa fi saba isaa irratti miidhaa geggeessaa erga turee booda as bayee dhiifama jechuun faaydaa tokkollee hin qabu waan jedhu irratti hundaayaniiti kan dhiifama isaa fudhatama dhabsiisan. Kan ajjeesee fi ajjeesise hundi as bayee dhiifama jechuun rakkoo ta’uus dubbatu.
Gama biraatiin dhiifamni Juneeydiin deeggarsa argataa jira. Dogoggora isaa hubatee dhiifama gaafachuu fi as bayee waa’ee isa dabree dubbachuu isaaf harki rukutamaa jira. Kanaafis akka sababaatti kan ka’e gochi isaa Oromoota ammas OPDO keessaa taa’anii mootummaa Woyyaanee tajaajilaa jiraniif barnoota ta’a isa jedhu. Kanaan maletti waa’ee OPDO fi TPLF irraa dubbachuun isaa qaamoota yeroo ammatti mootummaa Woyyaanee mormaniifis hubannoo dabalataa ni laata abdii jedhutu jira.
Yeroo kanatti Juneeydiin gadi bayee dhiifama gaaftuun isaa bu’aa malee kasaaraa hin qabu- hangamuu xiqqaattus. Gochi isaa hunda caalatti miseensota OPDOf ergaa dabarsu qaba. Waa’ee isa dabree kaasuun isaa namoonni OPDO keessa jiran akka ufeeggatanii fi saba isaanii irratti tankaarfii hamaa fudhachuu irraa akka ufqusatan taasisuu ni mala. Juneeydiin afaan isaa qabatee, hundatti dhokatee ta’uu ni danda’a. Akkasitti usee taa’uun isaa ammoo bu’aa inni qabsoo Oromootii fis ta’ee OPDO’n akka finciltu taasisuuf qabu xiinxallamuu qaba.
OPDO’n badii akka hojjataartu ifa. Garuu iddoo OPDO’n itti nu fayyadduu maltu yoo jiraate tokko osoo hin hafin itti fayyadamuu qabna. Kuni faaydaa tooftaa, ololaa fi odeeffannoo qaba. Dhimma Maaster Pilaanii Finfinnee irratti OPDO’n onneen dubbachuudhaanis ta’ee sagalee angawootaa woraabuudhaan kufaatii isiin Woyyaanee irraan gayaa turte hundi ni yaadata. Wanit akkanaa jajjabeeffamuu qaba. Kuni kan ta’u garuu namoota mootumma ganu qaanfachiisuu fi iddoo itti baqatu dhabsiisuudhaanii miti.
Yeroon kuni yeroo OPDO’n sirnicha tajaajilaa jirtu irraa abdii dhabdee fi dhoksaanis ta’u qabsoo Oromoo jajjabeessuuf hojjataa jirtuudha. Hunda caalatti nama mootummaa ganu diinsuun OPDO’n achumatti maxxantee akka haftuu, mootummaa jalaa miliquudhaafis ta’ee qabsoo Oromoo haala danda’an hundaa jajjabeessuudhaaf hamilee akka dhabdu godha. Hawaasni Oromoo miseensota OPDO gubbaa hanga jalaatti mootummaa kana ganuu fis ta’ee keessaa dadhabsiisuudhaaf fedhii qaban jajjabeessuu fi waadaa jireenyaa isaaniif mirkansuu qaba. TPLF worra dirree woraanaa irratti Dargii woliin dhabatee itti dhukaasa ture booji’anii loltuu ufii taasifataa akka turan yaadachuu qabna.
Previous articleHaylamaaram Dassaalenyi tankaarfii Fayyisaa Leellisaa Rio’tti fudhateef itti gaafatamaan Oromoo USA jiraatuudha jedha
Next articleErgamtoota naannoo Somaalee fi Afaar maaltu akkas mirqaansisee kofoo fi marxoo akka gatan taasise?